Cayaarihii Olombikada ‘Rio 2016’ oo soo xirmay – Kasmo Newspaper
Cayaarihii Olombikada ‘Rio 2016’ oo soo xirmay
Updated - August 22, 2016 11:00 am GMT
Iyadoo loo dabaaldegayo guushii, nabadgelyadii, marti-gelintii iyo quruxdii iyo qalbi-furnaantii reer Brazil iyo Rio 2016 ku soo dhammaadeen, ayaa ciyaaraha Olombikada xalay si rasmi ah loo soo xiray.
Xaflad ashqaraar leh oo ka dhacday Garoonkii markii hore lagu firay cayaaraha, waa Garoonka Maracana, ayaa lagu soo bandhigay mahrajaan qurux badan, damaashaad iyo dab-rid (Firework). Wuxuu ahaa barnaamij socday muddo ku dhow saddex saac oo xirriir ah.
Waxay ahayd habeen reer Brazil soo bandhigeen xirfadda fan iyo farshaxan ee ay hibada u leeyihiin. Kuwaas, oo in kastoo sannadkan ayan hormar fiican ka sameyn xagga billadaha, haddana quruxda iyo wanaagga ay ku soo dhammaatay, Rio 2016, reer Brazil waa uga badan tahay billado!
Olombikada Rio 2016 waa soo dhammaatay, waxaana cayaartooydii ka socday Qaramada kala duwan ku noqonayaan dalalkoodii, iyadoo koox walba la soo noqonayso guushii ay ka gaartay tartammadii cayaaraha. Halkaas oo biladaha ugu badan uu helay Maraykan; waxaa ku xiga Britain; waxaa ku sii xiga Shiinaha….
Itoobiya, wiilkeeda Oromada ah- Feyisa Lilesa – ee Billadda Qalinka ah soo hooyey, waxay u muuqataa in ay lumisay, oo uusan dalkiisii hooyo dib ugu noqon doonin, cabsi uu baqayo noloshiisa.
Soomaaliya, labadii dhalinyaro ee halkaas tegay, iyagu billado lama soo noqon doonaan, waxaana cajiib ah in ayba meesha tageen iyo wixii ay la tageen!
Waaba suurtogal in ay mutaan halkii ay mareen kuwii ka qaybgalay Olombikadii London 2012, oo weli baaqi ku sii ah beledkii Olombikada lagu qabtay – London
Cayaarihii Olombikada Rio 2016 waa la soo xiray, ballantuna waa kal dambe iyo Tokyo 2020. Waxaana dardaaranku yahay in Soomaaliya ayan mar dambe sidan oo kale adduunka uga soo dhex muuqan!
Waa in Soomaaliya joojiso oraahda ah: ‘Calanka ayaan meesha geynay!’.